कोरोनाबाट सतर्क राख्न बारपाक, लाप्राकमा कटुवाल कराउँदै | Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper
Published On : १२ चैत्र २०७६, बुधबार ११:३७
एकै ठाउँमा झुरुप्प बाक्लो बस्ती रहेको बारपाक र लाप्राक गाउँमा कोरोनाको सम्भावित महामारीबाट सतर्कता अपनाउन कटुवाल कराएका छन् ।
बिगत तीनदिनदेखि निरन्तर कटुवाल कराउन लगाइएको बारपाकका वडाअध्यक्ष लालबहादुर गुरुङले जानकारी दिए । एकहजार भन्दा धेरै घरधुरी एकैठाउँमा बारपाकभरि सूचना र सन्देश पुर्याउन दुईजना कटुवाल खटाइएको उनले बताए ।
धार्चे गाउँपालिका ४ लाप्राकमा करिब छसय घरधुरी एकैठाउँमा छन् । यहाँ बिहानदेखि साँझसम्म कराउनका लागि एकजना कटुवाल खटाइएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष सन्तोष गुरुङ बताउँछन् । सरकारले लागु गरेको लकडाउनलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न कटुवालले विशेष जोड दिने गरेका उनले बताए ।
कटुवालले कोराना भाइरसको बारेमा जानकारी दिने, यसबाट जोगिने उपायका बारेमा सन्देश दिने गरेका छन् । सात वटै वडामा सूचना सन्देश प्रबाह गर्न धार्चे गाउँपालिकाले कटुवाललाई तलब दिने गरेको छ ।
बारपाक गाउँको स्वास्थ्यचौकीमा कोरोनाको परीक्षण गर्न हेल्थडेस्क स्थापना गरिएको वडाअध्यक्षले जानकारी दिए । साथै राजनीतिक दलका नेता, जनप्रतिनिधि, स्वास्थ्यकर्मी, सामाजिक अगुवाहरु सम्मिलित पाँचपाँच जनाको समूहले घरदैलो कार्यक्रम गर्ने, पोष्टर, पम्प्लेट गर्ने गरेका उनले बताए ।
धार्चे गाउँपालिकाले पनि लाप्राकको गुप्सीभञ्ज्याङ र अर्मलामा हेल्थडेस्क स्थापना गरेर स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको अध्यक्ष गुरुङले जानकारी दिए ।